Borosy makiazy-11 borosy
Custom logo manokana marika borosy makiazy 11cm borosy kosmetika mainty napetraka miaraka amin'ny volo sentetika avo lenta.
Voalohany:Ity maodely vita amin'ny borosy makiazy ity dia lamaody eny an-tsena, ny volo voajanahary voajanahary dia malefaka sy sariaka amin'ny hoditra. Ny akora vita amin'ny hazo dia hazo izay ahazoana aina sy mateza.
Fitaovana avo lenta vita amin'ny fibre synthetic, malefaka sy ahazoana aina, manome fikolokoloana malefaka sy volom-bolo tsy mitete mba hizahana ny fizotran'ny fampiharana sy ny fampiasana traikefa.
Ny faharoa manendry ny iray amin'ireo borosy ireo amin'ny takolakao dia ho gaga ianao fa malefaka fotsiny ny volony. Ity sety ity dia natao hanahaka ny vokatry ny makiazy airbrush, izay midika fa ny fototra, ny fanafenana ary ny fahamendrehana dia hihatra tsy misy kilema.
Anaran'ny vokatra ara-nofo Fomba Item isaky ny set Size Famantarana Fonosana
Kitapo borosy Volo sentetika, tantanana hazo lamaody 11 Habe namboarina Sary namboarina Fonosana namboarina
Ny famoriam-bola feno dia borosy 11 miaraka amin'ny volom-borona sentetika an-tanana vegan. Ny tahony dia manampy amin'ny fanaraha-maso faratampony amin'ny fampiharana makiazy mba hanampiana anao hamorona endrika makiazy tadiavinao. Namboarina tamina andraikitra ity paosin-borosy ity.
Telo voalohany:Mpanjifa maro no manome antsika hevitra be dia be aorian'ny fitsapana azy ireo, kalitao avo lenta ny borosinay, satria mpanamboatra makiazy izahay, ary manana traikefa matihanina mandritra ny 15 taona amin'ity sehatra ity.
Ny famolavolana modely sy ny tsipika mety amin'ny tarehy, dia mety amin'ny makiazy isan'andro ary afaka mamorona makiazy tsy misy kilema kokoa ho anao.
Raha mitady safidy eco-friendly kokoa ianao dia tsy maintsy atao io borosy ilaina amin'ny EcoTools io. Izy ireo dia vegan 100% ary vita amin'ny alimina namboarina.
Efatra voalohany:Ny fampiharana makiazy ataonay dia fitaovana tsy misy kilema izay ampiasainao hamafana, hikorotana ary hampifangaro azy amin'ny toerany. Na mamorona maso mangamanga na takolaka voatapaina, ireto no setrasa tadiavinao ao amin'ny arsenalanao.
Ity setrika borosy fampianarana ity dia misy ny tena ilaina amin'ny fanampiana anao hamorona endrika tsy misy kilema. Ny sety dia misy borosy fototra hametahana ny fotonao, borosy fikosoham-bolo mba hivoatra, borosy miafina antsipiriany handrakofana ny tsy fahalavorariana, ary borosy fanafenana lehibe kokoa ho an'ny maso sy ny manodidina ny orona. Ny borosy lamaody lamaody dia manolotra famaranana amin'ny endriny rehetra tsy misy kilema. Ny borosy rehetra dia mety ho ao anaty paosin-koditra tsara tarehy mety tsara mandritra ny diany na fitsangatsanganana.
Teo aloha: Famaritana avo lenta tsy miandany Eyetteadow palette - Eye makeup-BD15-DW - JOYO
Manaraka: Borosy makiazy-14 borosy
Setsika borosy matihanina
Borosy makiazy-14 borosy
JOYO © Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Matte Eyeshadow Palette, Lokomena savony, Lipotra Mini, Eyeshadow tsara indrindra amin'ny crème, Solomaso maso volamena, Borosy tsara indrindra, Vokatra rehetra